अपांगता भएकी छोरीलाई ‘तीनमहिने सुई’ ! - bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > अपांगता भएकी छोरीलाई ‘तीनमहिने सुई’ !
२८ असार २०७८, सोमबार ०९:०६ bampijhyala
बाँपीझ्याला, रोल्पा । रोल्पाकी सरला (नाम परिवर्तन) ले अपांगता भएकी आफ्नी १९ वर्षीया छोरीलाई लामो समययता परिवार नियोजनको अस्थायी साधन तीन महिने सुई लगाइदिने गरेकी छन। द्वन्द्वकालमा शारीरिक हिंसासमेत खेपेकी सरलाका तीनमध्ये एक छोरी मानसिक रूपले अपांगताको सिकार भएकी छन्। विपन्न परिवारकी उनी दिनभर मजदुरी गर्न गएको समयमा उमेर पुगेकी छोरी जथाभावी हि“ड्न थालेपछि सावधानी अपनाउँदै उक्त सुई रोज्नुपरेको बताउँछिन्।
खराब नियत भएका पुरुषहरूको चंगुलमा परेकी छोरीको गत साल गर्भपतन गराउनुपरेपछि सरलाले छोरीका लागि तीन महिने सुई विकल्पका रूपमा रोजेकी हुन्। ‘म दिनभर मजदुरी गर्न जान्छु। छोरी एक्लै यताउति हिँड्छे। पोहर कुन चाहि पापीले छोरीमाथि जथाभाबी गरेछ। जसोतसो अस्पताल लगेर बच्चा फाल्नुप¥यो,’ उनी भन्छिन्, ‘दिशा, पिसाब र महिनावारीसमेत स्याहार्न नसक्ने छोरीलाई मन दुखाएर भए पनि तीनमहिने सुई लाइदिने गरेकी छु।’
माओवादी द्वन्द्वताका २०६० सालमा सुरक्षाकर्मीबाट घरछेउमै बलात्कारमा परेकी थिइन् सरला। त्यही पिरले रक्सी पिउने भएका पति अर्को वर्ष २०६१ सालमा बितेपछि उनको जीवनमा अर्को पीडा थपियो। उपचार अभावमा आठ वर्षका छोरासमेत गुमाएकी सरला यतिबेला बस्ने ठाउँ नभएपछि माइतीको शरणमा छिन। ‘दुई छोरी बिहे गरेर घर गइसके। छोरो सानैमा बितेको हो। आफ्नो भन्ने काही छैन। अहिले माइतीघरमा बसेकी छु।’ कहीँकतैबाट कुनै सहयोग नपाएकी सरला द्वन्द्वपीडितको तथ्यांकमा पनि अटाएकी छैनन्।
बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको खतरा भएका १२६ वटा जोखिमयुक्त बस्ती
१०बुँदे सहमती प्रति नेपाल समुह असन्टुष्टी
काँग्रेसमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ४ लाख ४३ हजार क्रियाशील सदस्य थपिए २८ असार २०७८, सोमबार ०९:०६
७० वर्षीय गन्धर्व १३ वर्षको उमेरदेखि सारङ्गी रेट्दै २८ असार २०७८, सोमबार ०९:०६
कस्तुप र देवीको तीज गीत ‘तिम्रो फोटो आँखैमा’ २८ असार २०७८, सोमबार ०९:०६
सोङ्गुकिपा ‘प्रेमनाथ’ डिजिटलकु खोईदउ जुर २८ असार २०७८, सोमबार ०९:०६
वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान अनलाइन आवेदन खुल्ला २८ असार २०७८, सोमबार ०९:०६